Ụbọchị My Pet » The Pụrụ Iche Onyinye nke Roses
The Pụrụ Iche Onyinye nke Roses
emelitere ikpeazụ: Apr. 09 2020 | 3 min agụ
Ma gị na-aga na a mbụ ụbọchị, ememe gị 10 afọ ncheta, ma ọ bụ alụmdi na nwunye proposing, Roses nwere ike ịbụ zuru okè onyinye otú ọ bụla ihunanya oge. Inye onyinye nke Roses enye a ụfọdụ echiche nke nghọta na klas na pụrụ n'ezie mmasị onye gị na. Di na nwunye a na-ekwupụta ịhụnanya ha ibe na Roses ruo ọtụtụ narị afọ. Otú ọ dị, n'ihi na ọ bụ ndị dị otú ahụ a nkịtị onyinye, nwere ike ị chọrọ ka a bit ọzọ echiche otú i nwere ike ime ka gị na onyinye nke Roses pụrụ iche. Unu na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke na-achọ cliche n'anya gị ụbọchị; tinye ụfọdụ ihe echiche onyinye gị. E nwere ihe ole na ole ụzọ na-enye nghọta nke Roses ma ka na-eme onyinye okike:
1. Roses Na a Ozi
Otu ụzọ pụrụ iche anyị na-enye Roses dị ka onyinye bụ site n'itinye a ozi na na petals gị Roses. N'ihi na a mbụ ụbọchị i nwere ike a flirty 'Hey Cutie’ dere na petals ma ọ bụ, maka nke ihunanya oge dị otú ahụ dị ka ihe ncheta, i nwere ike 'hụrụ m gị n'anya’ e dere. Ị pụrụ ọbụna na-etinye 'ị ga-alụ m?’ na a rose dị ka a pụrụ iche amaghị usoro.
Ọtụtụ florists (na ọbụna ụfọdụ jewelers) ga na-ere Roses na-trimmed na gold. Ezie na nke a ga-eri gị a bit karịa iri na abuo mgbe Roses, otu gold trimmed rose nwere ike tinye a larịị nke miri emi romance na onyinye gị, ghara ikwu creativity. Otu kwukwara uru a gold trimmed rose nke bụ dịruru ukwuu karịa a mgbe rose. Roses na-Elezie enameled na trimmed na gold inye ha anya nke ọhụrụ ịkpụ Roses na pụrụ iche sparkle ọlaedo.
Ọtụtụ ndị inyom (na ụfọdụ ndị ikom kwa) n'anya okooko osisi nke fọrọ nke nta ka ha hụrụ n'anya chocolate. Gịnị na-enye onyinye abụọ na onye na chocolate bilie! Gọọmet chocolate nracha ụlọ ahịa na-ere chọkọletị na e hiwere n'ime pụrụ iche shapes maka oge pụrụ iche nke onyinye. Otu n'ime ndị shapes bụ na-emekarị n'ụdị a otu rose. Ị nwere ike ịzụta otu chocolate bilie ma ọ bụ zụta a iri na abuo na ndokwa ha dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị a bouquet nke ezi Roses. Ọ bụrụ na gị ụbọchị hụrụ chocolate ọ (ma ọ bụ ọ na-) ga doro anya na-ezigbo anya.
4. Otu Rose Akwụrụ Otu si Otuowo
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-enye ndị omenala onyinye nke iri na abuo Roses, ma chọrọ ka ịgbakwunye na amara ihe flair, na-aga gị ore fulawa na ịzụta a 11 acha ọbara ọbara Roses, na 1 iche acha rose. Roses nwere ike na-abịa a dịgasị iche iche nke agba wee jide n'aka na-alụbeghị di rose zuworo a iche na-eguzo si 11 acha ọbara ọbara Roses, ma na agba adịghị na-akwadoghị na ndị ọzọ Roses. Mgbe ị na-anapụta gị bouquet agwa gị pụrụ iche mmadụ na ha mara mma na-eme ka ịtụnanya ha guzo si ike nke ìgwè mmadụ na-alụbeghị di mara mma bilie ahụ e debere iche n'ebe ndị ìgwè nke acha ọbara ọbara Roses na-egosipụta na pụrụ iche mara mma gị na onye òtù ọlụlụ.
Ndị a bụ ndị anọ iche ụzọ mee ka gị na onyinye nke Roses a ike echiche na gị ịrịba ama ndị ọzọ. Ezie Roses bụ onyinye dị ebube na-eme ememe onye ị hụrụ n'anya ma ọ bụ a pụrụ iche na mmekọrịta gị, na-agbakwunye ụfọdụ creativity site na iji otu n'ime ndị a echiche nwere ike inyere gị mma na-egosi ihe a pụrụ iche mmetụta onye gị nwere na ndụ gị na n'ihu mesie ole ị na-elekọta ha. Ọ ga-ike a doro anya obi ụtọ ebe nchekwa maka onye ị hụrụ n'anya na-akụ afọ na-abịa.
Ịhụnanya- 7 Easy Nzọụkwụ
Isii Iwu Iji Nyere Gị Aka Jikwaa Onye Inyeaka Gị si Pet
Little Mara ụzọ na-Ịhụnanya nke Ndụ Gị